Shuruudaha isticmaalka - InstaZOOM
Bogga ugu weyn » Shuruudaha isticmaalka
Adigoo isticmaalaya mareegahayaga, waxaad caddaynaysaa inaad ogolaatay shuruudahan. Fadlan si taxadar leh u akhri oo hubi inaad u hoggaansanto.
1. Waa sharci in la isticmaalo mareegahayaga.
2. Lama ogola in la koobiyeeyo walxaha xuquuqda daabacan.
3. Lama ogola in la dul maro instazoom.mobi faafin faylasha la soo dejiyey.
4. Adiga kaliya ayaa xaq u leh in aad u isticmaasho arimo shaqsiyeed.
5. Ma duubno waxa ka dhaca server-yadayada.
6. Ma kaydinno faylasha server-yadayada si aan xad lahayn.
7. Codsiyada soo dejinta waxaa sameeya isticmaalayaasha laftooda, sida DMCA (Xeerka Xuquuqda Muujinta Sanadka) lagu tilmaamay.
Shuruudaha Isticmaalka buuxa:
Haddii adiga instazoom.mobi isticmaal ama daaran instazoom.mobi helitaanka, waxaad ogolaatay shuruudaha isticmaalka instazoom.mobi sida ku cad dukumentigan. Laguuma ogola instazoom.mobi ama inaad isticmaasho adeegyadeeda haddii aadan aqbalin shuruudahan.
Waxaad qiraysaa in shirkadu ay kuu soo diri karto wararka ku saabsan shuruudaha isticmaalka wakhti kasta iyo iyada oo aan la sheegin sababaha. Waxa kale oo aad ogolaatay in lagu xidho isbedelada mustaqbalka ee Shuruudaha Isticmaalka isla marka la soo dhejiyo mareegaha.
Haddii aadan ogolayn mid ka mid ah shuruudaha isticmaalka, oggolaanshahaagu si toos ah ayuu u dhacayaa haddii aad ku xadgudubto mid ka mid ah qodobbada. Markay go'aan tahay instazoom.mobi shatigan waa la joojin karaa wakhti kasta iyo iyada oo aan la sheegin sababo.
Boggan waxa la cusboonaysiiyay Janaayo 1, 2014.
Isticmaalka faylalka loggia
Kama duubno wax ciwaannada IP ah ama xogta isticmaalaha booqdayaashayada. Waxaan isticmaalnaa Google Analytics si aan u aragno inta qof ee soo booqda websaydkayaga. http://www.google.com/analytics/tos.html
Waxaan u isticmaalnaa xayeysiiska qolo saddexaad si aanu u xayaysiino instazoom.mobi Si loo muujiyo xayaysiisyada Adeegyada xayaysiisyada qaarkood waxay adeegsadaan tignoolajiyada sida cookies-ka iyo ishaarrada mareegta marka ay ku xayaysiinayaan mareegahayaga, kaasoo u soo diraya macluumaadka adiga kugu saabsan xayaysiiyayaasha. Tani waxay lama huraan u tahay si ay kuu tusto xayaysiisyada afkaaga. Ka akhri wax badan oo ku saabsan adeegyadooda shabakadooda.
1. Wax sharci ah ha ku jabin dalkaaga.
2. Ha soo dajin muusik si sharci darro ah loo leeyahay.
3. Instazoom- Faylasha waxaa loo isticmaali karaa oo keliya arrimo gaar ah mana la gudbin karo ama lama qaybin karo.
Waxaad ogolaatay shuruudahan iyo shuruudahan adiga oo isticmaalaya mareegahayaga.
DMCA oo ka saar
- Tani waa qalab fudud oo loogu talagalay Instazoom si loo ballaariyo sawirada.
- Ma martigelinno faylasha sawirada.
- Mareegtan ma taageerto nuqullada budhcad-badeedda.
Kahor intaadan nala soo xidhiidhin, fadlan akhri boggan: DMCA.
- Haddii aad tahay milkiilaha xuquuqda daabacaada ee sawirka oo aad rabto inaad ka hortagto beddelkiisa, fadlan noo soo dir iimayl.
Waxaan joojin doonaa beddelka sawiradan.
Haddii aad hayso wax su'aalo ah ama soo jeedin ah oo ku saabsan adeeggayaga, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xidhiidho: [emailka waa la ilaaliyay]